MIVANTANA amin’ny 13 Jolay: “Vazimba Teratany+Nomerika: Ny fomba ataon’ny tanora hanomezany aina vao ny fitenin-drazany ety anaty aterineto · Global Voices teny Malagasy
Fotoana halefa mivantana amin'ny YouTube sy Zoom (mila misoratra anarana)
Voadika ny 08 Jolay 2021 2:37 GMT
Manodidina ny 40% amin'ireo fiteny 7.000 iresahana manerana izao tontolo izao no heverina fa tandindonin-doza, ary miaraka amin'ny fanombohan'ny Taompolo Erantany ho an'ny Fiteny Teratany, volana enina monja lasa izay, samy sainin'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany manerana izao tontolo izao ireo fanamby atrehan'ny fiteniny sy ireo hetsika tsy maintsy ataon-dry zareo hitahirizana sy hanomezana aina vao azy ireny.
Anisan”ny tetika ampiasain'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany ny fampiasàna ny teknôlôjia nomerika mba hanatsaràna ny fianarana sy ny fampiroboroboana ny fitenin-dry zareo. Tena zavadehibe ny famoronana andian-taranaka vaovao mpiteny azy, satria araka ny maridrefin'ny UNESCO momba ny fahelàna velona sy ny maha-tandindonin-doza ny fiteny, fanalahidy fototra amin'ny famaritana ny fahasalaman'ny fiteny iray ny fifandraisana any anatin'ireo sehatra vaovao / fifampitàna eo amin'ireo andian-taranaka teo aloha sy aty aoriana.
Miaraha aminay amin'ny 13 Jolay (ny 14 Jolay ho an'ireo mpihaino ao Oseania) hanaraka fizaràna iray manokana amin'ireo andiana seminera an-tambajotra karakarain'ny Global Voices Insights, hitondràna miaraka an'ireo mpiaro ny fiteny sy ireo mpikatroka avy any Aostralia sy Meksika, hiresaka ny lohahevitra “Vazimba Teratany+Nomerika: Ny fomba ataon'ny tanora hanomezany aina vao ny fitenin-drazany ety anaty aterineto.”
Karakarain'ny Tetikasa Rising Voices avy ato amin'ny Global Voices sy ny First Languages Australia (ireo fiteny voalohany tao Aostralia) miaraka amin'ny fanohanan'ny Masoivohon'i Aostralia ao Meksika, halefa mivantana ao amin'ny YouTube manomboka amin'ny 7 ora hariva, ora ao Meksika (CDT)/10 ora maraina, ora ao Sydney (AEST) ny fotoana. Potsiro eto hamantaranao ny ora mifanandrify amin'ny ora ao amin'ny faritra misy anao. Hisy fandikàna eo noho eo ao amin'ny Zoom ho an'ireo mpandray anjara voasoratra anarana.
Maimaimpoana ary misokatra ho an'ny rehetra ny fotoana, ary ho alefa mivantana ao amin'ny Zoom (mila misoratra anarana) sy YouTube.
[Hisoratra amin'ilay seminera]
Ireto avy no ho hita mandritra ilay seminera:
Isela Xospa (Moderator): Isela mpanao tefiendrika, mpanaingo, ary mpanonta boky, avy any Milpa Alta ao amin'ny faritra Nahua any atsimo-atsinanan'i Mexico City. Efa niasa ho an'ny Fondo de Cultura Económica, ILCE México ary ny David Bowie Archive, ary mpanorina ny Ediciones Xospatronik, izay anoratany, anaingoany, sy amoahany boky amin'ny fiteny teratany ho an'ny ankizy sy ny tanora.
Annalee Pope: Annalee dia vehivavy Wakka Wakka avy ao Queensland Afovoany, Aostralia. Ny taona 2013 no nanomboka niasa i Annalee mba hanome aina vao sy tanjaka ireo fiteny Abôrizena, fony izy lasa Mpandrindra ny Ivontoeran'ny Teny tao Queensland Afovoany. Nanatevin-daharana ny First Languages Australia i Annalee, nitàna ny toerana mpiandraikitra ny tetikasa tamin'ny Tetikasa Fanohanana ireo Fiteny Lohalaharana, avy eo nirotsaka tao amin'ny fandaharanasa Tanora Tompondaka an'ny First languages Australia fony izy io nanomboka tamin'ny 2013. Hatreo izy dia lasa mpiahy an'ireo tanora tompondakan'ny fiteny.
Joaquín Yescas Martínez: Joaquín dia lehilahy Zapoteco Xhidza avy ao Oaxaca, Meksika, mpiara-manorina ny Xhidza Collective ary mpandrindra ny Xhidza Telecommunications, mpanorina sy mpandrindra ny Xhidza Penguin School, ary teknisiàna sy mpamokatra feo ao amin'ny Onjampeo Bëë Xhidza. Joaquín dia mpikatroka ho an'ny fiteny vazimba teratany, Rindrambaiko maimaimpoana, kolontsaina malalaka, ny filôzôfian'ny vondrompiarahamonina ary ny lalàm-pitondrantenan'ireo mpijirika (hacker).
Maria Lilia Hau Ucan: Maria dia avy any Kinil, Yucatan, Meksika. Niofana ho mpisolovava, niasa nampianatra, mpandika teny, mpandika lahatsoratra ary mpanao kaonferansa sy mpandray anjara tamina tetikasa isankarazany mitodika amin'ireo vondrompiarahamonina sy ny fanomezana aina vao ny fiteny sy kolontsaina Maya.
Rachel Dikul Baker: Dikul dia vehivavy Yolŋu avy ao amin'ny Faritra Avaratra ao Aostralia. Rehefa tsy mandehandeha mitety izao tontolo izao manao hazakazaka marathons izy, dia manoro hevitra ireo vehivavy tanora Yolŋu, manampy azy ireny hanorina fikirizana sy fanomezana hasina ny tenany ary hamantatra làlan-kizorana amin'ny asa ho entin'izy ireny manatratra ny tanjony. Ny anjara asan'i Dikul ao amin'ny ARDS Aboriginal Corporation dia ny mandrakitra antontan-kevitra momba ireo fiteny Yolŋu, ny fanamoràna ny fifangaroan'ny kolontsaina sy ny fandikàna, fandefasana izany ao amin'ny Yolŋu Radio ary ireo hetsika ho an'ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra. Mahay miteny Djambarrbuyngu sy fiteny Yolŋu efatra hafa izy.